at & t yakapa ruzivo runotsausa svondo rapfuura nezve kubata kwayo california & apos; s mambure ekusarerekera mutemo
Kuru Nhau & Ongororo AT & T yakapa ruzivo runotsausa svondo rapfuura nezve kubata kwayo California & apos; s mambure ekusarerekera mutemo
Kusapindira mune zvematongerwo enyika ndeye Obama-era mutemo uyo unomanikidza ISPs uye vasina waya vanopa kurapa kwese kwese kwemukati zvakafanana. Mune mamwe mazwi, kambani inoyerera vhidhiyo kune vanyoreri haigone kubhadhara mutakuri mari yekuwedzera kuti hova dzavo dzitumirwe pamusoro pechimbichimbi network. Ajit Pai paakapihwa sachigaro weFCC naDonald Trump muna2017, sangano rinodzora rakavhota kubvisa kusarerekera mumabhuku (maRepublicans akavhotera kubviswa apo maDemocrat akavhota kuti achengete mitemo iri mumabhuku. Veruzhinji, vaida kuchengeta mambure. kusarerekera, kwakatsamwiswa uye dzimwe nyika dzakapa mutemo unoita kusarerekera mambure mutemo mumatunhu iwayo.
Imwe yeaya matunhu akapfuudza iwo wega mambure kusarerekera mutemo ndeye California. Uye AT & T sezviri pachena haina kutaura chokwadi Chitatu chekupedzisira (kuburikidza ArsTechnica ) payakataura kuti California & apos; mutemo unodzivirira kubva kupa izvo 'zero-rated' zvemukati kune vatengi vefoni. Zvemukati izvo zviri 'zero-zvakatemwa' hazviverengeke zvinopesana newanyoreri & apos; s pamwedzi data data cap. Chokwadi ndechekuti pasi pemutemo wenyika yeCalifornia, mutakuri anogona kuenderera mberi nekupa yake yega vhidhiyo streamer, HBO Max, pane 'zero-rated' hwaro chero bedzi zvikaita zvakafanana kune vese vanokwikwidza mavhidhiyo. Asi zvinoita sekudaro AT & T. wasn & apos; haifarire kupa mamwe masevhisi ekushambadzira kune vatengi pasina iwo kuverenga pamusoro padzo dhata makapu. Saka pachinzvimbo chekubvumira vanokwikwidza veHBO Max kutenderera kune vanyoreri veAT & T vasina kunyudza mumabhaketi avo e data, AT&T yakafunga kudonhedza zvese zvirimo 'zero-rated'.
AT & T inotsvaga California & apos; s mambure ekusarerekera mutemo nenzira isiriyo
Mune chirevo neChitatu chapfuura, nyika & apos; wechitatu pakusa waya mupi akati, 'California yakadzika mutemo wekusarerekera kurambidza & apos; yakatsigira data' masevhisi ayo akabvumidza makambani kubhadhara, kana & apos; anotsigira, 'kushandiswa kwedata kwevatengi vavo vari zvakare vatengi veAT & T vasina waya. Nehurombo, pasi pemutemo weCalifornia isu tave kurambidzwa kupa mamwe ma data maficha kune vatengi mahara. ' Mutakuri akaenderera mberi achiti sezvo internet isinga zive miganhu yenyika, mutemo mutsva unodzivirira vashandisi veAT & T mumatunhu ese kuti vagamuchire hova 'zero-rated'.
FCC circa 2017 apo mambure kusarerekera kwakabviswa pamabhuku. Iye zvino anoita sachigaro wechigaro Jessica Rosenworcel kuruboshwe
AT & T yakatiwo 'Pasati paCalifornia & rsquo; s mutemo, vanotsigirwa data vatengi vaikwanisa kutarisa, kutenderera uye kunakidzwa kunyorera kubva kune vanotsigira vasina kushandisa yavo yemwedzi data data. AT & T vhidhiyo vanopa vakashandisa yakatsigirwa data kupa Data Yemahara TV, ichibvumira vatengi kufambisa avo avanofarira mafirimu uye anoratidza pamusoro peAt & T yavo isina waya sevhisi pasina iyo kuverenga vachipesana neayo isina waya data data. AT & T Kufambisa kwave nemakore kukoka kukoka chero chinzvimbo kuti chive chisina waya dhata inotsigira pane zvakafanana mamiriro uye mamiriro. Sezvo zvakatanga, yedu yakatsigirwa data sevhisi, uye zvinokwikwidza zvinopihwa kubva kune vamwe vasina waya vanopa, vaendesa zvakakosha zvikomborero uye vakaponesa vatengi mari. Vatengi zvakare vakafarira kuputika kwemavhidhiyo ekuparadzira masevhisi.
Stanford mutemo purofesa Barbara van Schewick, aishanda kuCalifornia & apos; s kudzivirira kwayo 'mambure kusarerekera' mutemo, akaudza ArsTechnica kuti 'California & apos; s mambure ekusarerekera mutemo hauregerere zero zero-chiyero; inorambidza anti-kukwikwidza mafomu e zero-chiyero. Mutemo unorambidza AT & T & apos; s anti-makwikwi scheme uko inoverengera ingangoita zvese zvinoitwa nevanhu paInternet, kusanganisira kuona Twitch, Netflix, uye yavo yekumba chengetedzo makamera, vachipesana nevashandisi 'data caps, asi haina kuverenga data kubva kuAT & T & apos; 's mavhidhiyo masevhisi.' Icho chinonyanya kukosha ndechekuti AT & T 'zero-yakarongwa' yayo yega masevhisi masevhisi uye yakaita zvimwe chete kune vepamhepo sevhisi vanopa iyo yakabhadhara AT&T mukutsinhana nekupa chaiwo maapplication 'zero-chiyero.' Sezvineiwo, apo ArsTechnia payakabvunza AT&T nei isingaite zero-rate zvese zvinofambisa sezvinobvumidzwa pasi peCalifornia & apos; s mutemo wekusarerekera, mutakuri akaramba kupindura.
AT & T inogona kunge iine misspoke payakati mutemo weCalifornia & apos unomanikidza kuti ivhare data rakatsigirwa mune mamwe matunhu kunze kweCalifornia. Mumatare epfupi kumashure mu2020, California Gweta General Xavier Becerra akadaro. 'AT & T & apos; s zero-ratidziro chirongwa parizvino chinobvumidza vashandisi kudzima yavo zero-chiyero vadzime. Nekudaro, zvinopesana nezvataurwa neAT & T & apos; yatove nekwanisi kudzima zero-ratidziro kune vashandisi vanosarudza uye vanogona kungoshandisa iko kushanda kudzima zero-ratidziro yevashandisi veCalifornia. '
Ino haisi & apos; kekutanga nguva iyo AT&T kubatwa ichityora mitezo yekusarerekera. Muna 2016, apo FCC yaidzorwa neveDemocrat, iyo FCC yakati, & apos; iyo Sponsored Data chirongwa chinonyanya kufarira AT & T & apos; s mavhidhiyo zvinopihwa ivo vachisarura zvisina musoro kune vasingabvumirane vanopa mabhenji uye kudzikisira kugona kwavo kupa anokwikwidza mavhidhiyo masevhisi kumaAT & T & apos; s Broadband vanyoreri padanho rinotamba munda. Mutongo wakadzoserwa apo Pai akatora chinzvimbo chegweta gore rinotevera.
bash script yekukurumidza yekuisa
renyeredzi chinyorwa 20 chekuburitsa zuva
s8 + vs chinyorwa 5
Static Kuongorora vs Dynamic Kuongorora muSoftware Kwayedza
LG yakarova nekirasi-yekuita mhosva pamusoro peG4 uye V10 bootloop dambudziko
Heano & maapos ekuhodha download Pokémon Go pane yako iOS kana Android chishandiso zvisinei nekwaunogara
Samsung Galaxy Cherechedzo 8 inogona kuwana yakasarudzika nyowani nyowani sarudzo
Spotify inotangisa Iwe chete mu-app mimhanzi chiitiko, nyowani Blend nhare-chete chimiro
Apple iPhone 6s Plus vs Samsung Galaxy S6 kumucheto +
iPad Air 4 64GB vs 256GB kuchengetedza: ndeipi yaunofanira kuwana?
Samsung Galaxy S20 Ultra vs S20 Plus vs S20: Kutengesa kumhanya kuenzanisa
Samsung Level On Pro isina waya mahedhifoni ongororo